IATA: fitomboan'ny karatra an'habakabaka voalohany matanjaka indrindra hatramin'ny 2017
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » IATA: fitomboan'ny karatra an'habakabaka voalohany matanjaka indrindra hatramin'ny 2017
Airlines • Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Satria ny fampitahana eo anelanelan'ny 2021 sy 2020 ny valim-bolana isam-bolana dia voasivan'ny vokadratsin'ny COVID-19, raha tsy misy fanamarihana hafa, ny fampitahana rehetra hanaraka dia hatramin'ny Jona 2019 izay nanaraka lamina fangatahana mahazatra.
Ny fangatahana eran-tany ho an'ny volana Jona 2021 dia nitombo 9.9% raha oharina tamin'ny Jona 2019.
Ireo mpitatitra amerikana avaratra dia nanome isa 5.9 isan-jato tamin'ny tahan'ny fitomboana 9.9% tamin'ny volana Jona.
Ny toedraharaha ara-toekarena sy ny dinamika manome vahana tsara dia mijanona ho be mpanohana ny entan'ny rivotra.
The Fikambanam-pitaterana an'habakabaka iraisam-pirenena (IATA) namoaka ny angon-drakitra ho an'ny tsena fitaterana an-habakabaka eran-tany ho an'ny volana Jona izay mampiseho fanatsarana 9.9% amin'ny fampisehoana talohan'ny COVID-19 (Jona 2019). Izany dia nanosika ny fitomboan'ny entam-barotra antsasakadiny voalohany ho 8%, ny fahombiazany tamin'ny tapany voalohany matanjaka nanomboka tamin'ny taona 2017 (raha ny indostria dia nampitombo ny fitomboana 10.2% isan-taona).
Ny fangatahana eran-tany ho an'ny volana Jona 2021, refesina amin'ny kilometatra taonina (CTK) dia nitombo 9.9% raha oharina tamin'ny Jona 2019.
Ny fiovana isam-paritra amin'ny fampisehoana dia manan-danja. Ireo mpitatitra amerikana avaratra dia nanome isa 5.9 isan-jato (ppts) amin'ny tahan'ny fitomboana 9.9% amin'ny volana jona. Ireo mpitatitra avy any Moyen Orient dia nandray anjara 2.1 ppts, zotram-piaramanidina eropeana 1.6 ppts, seranam-piaramanidina afrikanina 0.5 ppts ary mpitatitra Asia-Pacific 0.3 ppts. Ireo mpitatitra amerikanina latina dia tsy nanohana ny fitomboana, nanaratra ny 0.5 ppts amin'ny fitambarany.
Ny fahaiza-manao ankapobeny, refesina amin'ny kilaometatra entin'ny kilometatra (ACTKs), dia voafehy hatrany amin'ny 10.8% ambanin'ny ambaratonga talohan'ny COVID-19 (Jona 2019) noho ny fitobian'ny fiaramanidina mpandeha. Nihena 38.9% ny haavon'ny kibo tamin'ny jona 2019, voafafa amin'ny ampahany tamin'ny fisondrotana 29.7% ny fahafaha-manao mpitatitra entana.
Ny toedraharaha ara-toekarena sy ny dinamika manome vahana dia mbola manohana be amin'ny entan'ny rivotra:
Ny tahan'ny fanisana amerikana amin'ny varotra dia ambany indrindra. Midika izany fa ny orinasa dia tsy maintsy mameno haingana ny tahiriny, ary mazàna mampiasa entana amin'ny rivotra mba hanaovana izany.
Ny indostrian'ny Purchasing Managers Indices (PMI) - famantarana ny fitakiana entam-barotra amin'ny habakabaka - dia mampiseho fa ny fahatokisan-tena amin'ny orinasa, ny vokatra famokarana ary ny baiko fanondranana vaovao dia mitombo haingana amin'ny ankamaroan'ny toekarena. Ny ahiahy amin'ny fiovan'ny mpanjifa manan-danja amin'ny entam-barotra dia tsy tanteraka.
Ny fifaninanana vidiana sy ny fahamendrehana ny entan'ny rivotra mifandraika amin'ny fandefasana kaontenera dia nihatsara. Nihena be ny salan'isan'ny entan'ny rivotra mifandraika amin'ny fandefasana. Ary ny fandaharam-potoana azo itokisana ireo mpitatitra ranomasina dia nilatsaka, tamin'ny Mey dia manodidina ny 40% izany raha oharina amin'ny 70-80% talohan'ny krizy.
“Mandeha haingana ny entan'ny rivotra satria manohy ny famerenana amin'ny laoniny ny krizy COVID-19. Miaraka amin'ny fangatahana tapany voalohany 8% ambonin'ireo ambaratonga mialoha ny krizy, ny entana amin'ny habakabaka dia làlan'ny fidiram-bola ho an'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka maro rehefa miady amin'ny fanidiana ny sisin-tany izay manimba hatrany ny orinasan'ny mpandeha iraisampirenena. Ny zava-dehibe dia toa hitohy ny fampisehoana matanjaka amin'ny tapany voalohany, "hoy i Willie Walsh, IatăTale jeneraly.